Izy io dia voasambotra rehefa tratra ambodiomby nangalatra ilay biby fiompy. Mba tsy nikasi-tànana ny olona fa kosa tsy nanaiky raha tsy laniny ilay akoho velona. Tsy afa-nanoatra ilay olon-dratsy mba ho fiarovana ny ainy.
ZANDARY 36 NIDOBOKA AM-PONJA
Tafiakatra 36 ny zandary efa nidoboka am-ponja tao anatin’ny enim-bolana. Izy ireo dia na nandray anjara mivantana tamin’ny asan-jiolahy na koa nanao fanararaotam-pahefana. Ny sasany kosa dia nanao kolikoly ary notorian’ny olona nony avy eo. Nanao tatitra momba izany ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria. Ny tsikaritra dia samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ny minisitry ny mpitandro ny filaminana raha vao nitranga ny raharaha Ampitatafika.
RESAKA TONDRO MOLOTRA
Tondro molotra fotsiny dia nosamborina ary nofatorana tady ny sefo fokontany tao Nosiarina, tanàna iray ao Sambava. Nampangaina fa niray tsikombakomba tamin’ny olona iray nitory noho ny fangalarana ny taninyizy io. Tonga tokoa ny mpitandro ny filaminana nisambotra ilay olona nefa tsy hita ny nanjavonany. Nifatratra tany amin’ny sefo fokontany indray ny rihitra nony avy eo. Voatery niditra an-tsehatra ny olobe sy ny tangalamena vao nilamina ny raharaha.
Kandidà miisa dimy no tsy manaiky ny vokatra havoakan’ny CENI na dia mbola vonjimaika aza. Samy ao amin’ny boriborintany fahefatra izy ireo ary niray feo tamin’ny alalan’ny fanambarana iombonana, ny amin’ny fisian’ny hosoka sy ny kolikoly tamin’ny fifidianana farany teo. Milaza fa manana porofo izy ireo ary tsy hanaiky ny zava-nitranga.
MPAMPIANATRA FRAM ANY AMBOASARY ATSIMO
Misintona ny lakolosy fanairana ny mpampianatra FRAM any Amboasary Atsimo. Nilaza izy ireo fa efa hatramin’ny volana desambra tamin’ny taon-dasa no nandray karama farany ary misy amin’izy ireo koa no efa folo taona tsy lasa mpiasam-panjakana raikitra ihany. Lasa asa soa ny fampianarana any amin’iny faritra iny. Mandrahona ny hitokona izy ireo.
# Tafiditra ao anatin’ny « grillage » izay fiarovana ny zaridaina eo Analakely ireo zaza sy tanora tsy manan-kialofana. Mila mijery maika izany ny kaominina satria efa maimbo valan-drano sahady ilay toerana no lasa toerana fiadivan’izy ireo. Manimba endrika tanteraka ny tanàna ny zava-miseho ary mila jeren’ny tompon’andraikitra haingana.